Nhau - Mbiri mbiri Tekinoroji ye IR Remote
Kana zvasvika pakutaurirana mutengo, IR iri kure mutengesi anoti icho chigadzirwa chakachipa zvikuru apo mutengi anogara achitaura kuti chakanyanya kudhura. Nekudaro, chikamu chemutengesi chinogona kuswedera pa0% Pane zvikonzero zviviri. Zvisinei, isu hatifanirwe kungotaura chete nezvebatsiro asi zvakare tinofanirwa kutora tekinoroji tichifunga. Isu isu veYangkai kure hatigone kupa yakaderera mutengo pamusika, chinokonzera ndechekuti isu tinoramba tichiisa mari muR & D. Nekudaro, kutonga kwedu kure kuri nani pane vamwe vari muhunhu. Nditevere kuti unzwisise maviri epakati tekinoroji ye IR kure.
Kazhinji kutaura, IR iri kure ine zvikamu zviviri. Chimwe chikamu ndechekutapurirana. Chinhu chikuru chechikamu ichi infrared emitting diode. Iyo yakasarudzika diode umo izvo zvinhu zvinosiyana kubva kune zvakajairika diode. Mamwe magetsi emagetsi achawedzerwa kumagumo ese e diode kuitira kuti ivhure mwenje we IR panzvimbo yechiedza chinoonekwa. Parizvino, iyo IR iri kure pamusika inoshandisa diode iyo inotamisa IR wave wave urefu pa940nm. Iyo diode yakafanana neyakajairika diode kunze kwemuvara. Imwe IR iri kure yekugadzira inogona kusaziva iyi tekinoroji zvakanaka. Kana iyo IR wave kureba isina kugadzikana, iyo yekutenderera's chiratidzo kufambisa ichakanganiswa. Chimwe chikamu ndechekugamuchira chiratidzo. Infrared yekugamuchira diode inoita basa mune rakadai basa. Chimiro chayo chakatenderera kana chakaenzana. Kudzokera voltage inoda kuwedzerwa, kana, haigone kushanda. Mune mamwe mazwi, infrared yekugamuchira diode inoda kushandisirwa mashandisirwo ekukwirira kwekunzwa. Sei? Nekuda kwesimba rekutapudza simba re infrared emitting diode, chiratidzo chinogamuchirwa neInfrared yekugamuchira diode haina simba. Kuti uwedzere mwero wekutambira masimba, akapedza infrared ekugamuchira diode anoshandiswa zvakanyanya apfuura makore apfuura.
yakapedza infrared inogamuchira diode ine maviri marudzi. Mumwe anoshandisa simbi jira kudzivirira chiratidzo. Imwe yacho iri kushandisa ndiro yepurasitiki. Ose ane mapini matatu, VDD, GND uye VOUT. Kurongeka kwepini kunoenderana nemhando yayo. Ndokumbira utarise kune rairo dzakapihwa nemugadziri. Yakapedzwa infrared yekugamuchira diode ine mukana, vashandisi vanogona kuishandisa zviri nyore, pasina kuomarara kuyedza kana yakavharirwa kudzivirirwa. Asi, ndapota teerera kune inotakura frequency ye diode.